चीन OEM कस्टम Nitrile उच्च शेख रबर बल निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Zhonggao
घर > उत्पादनहरु > OEM रबर भाग > कस्टम OEM रबर भाग
OEM कस्टम Nitrile उच्च उछाल रबर बल
OEM कस्टम Nitrile उच्च शेख रबर बल मुख्य लाभ: पहिलो, उत्कृष्ट विरोधी रासायनिक चरित्र। यो लगभग सबै माध्यमहरुमा लागू हुन्छ दोस्रो, तापमान दायरा धेरै फराकिलो छ। (लगभग -30 ° C to200 ° C) तेस्रो, विरोधी compressibility प्रकार्य धेरै राम्रो छ। चार, तेल प्रमाण, क्षार प्रतिरोध, राम्रो लोचदार र लामो जीवनकाल।
OEM कस्टम Nitrile उच्च शेख रबर बल विवरण:
1. Ningbo Zhonggao SealHad आफ्नै ढाँचा विभाग 20000 आकार मोल्ड, भित्री व्यास 0.05mm बाट 1.2m, C/S 0.5mm देखि 20m सम्म एक समय आकार को लागी एक मोल्डिंग हुन सक्छ, सबैभन्दा ठूलो आईडी 6m, C/S मा बनाउन सक्छ। 30m भन्दा माथि
२. NBR मटेरिया -40 120 देखि 120 ° सम्म उच्च र कम तापमान सामना
OEM कस्टम Nitrile उच्च शेख रबर बल पैरामीटर:
हामी बाट सील को अंगूठी किन्न स्वागत छ। हामी एक अग्रणी र पेशेवर चीन निर्माताहरु र यस क्षेत्र मा आपूर्तिकर्ताहरु मध्ये एक हो। र हाम्रो कारखाना स्टक मा थोक उत्पादनहरु तपाइँको छनौट मा छ। कृपया एक आदेश राख्न स्वतन्त्र हुनुहोस्। अनुकूलित आदेश पनि स्वीकार गरीन्छ।
† † तापमान:5â 25 25 25 â the the आदर्श भण्डारण तापमान हो। गर्मी र घाम संग सम्पर्क बाट बच्नुहोस्। क्रायोजेनिक भण्डारण राज्य सील बाट हटाइयो, २० â „before वातावरण भन्दा पहिले केहि समय को लागी पहिलो स्थान।
idity † आर्द्रता: गोदाम को सापेक्ष आर्द्रता 70%भन्दा कम हुनु पर्छ, धेरै गीला वा धेरै सुक्खा बाट बच्न को लागी, घनीभूत छैन।
धातु वा nonmetallic सामाग्री संग सम्पर्क: चुम्बकीय सामाग्री, कच्चा फलाम, तामा र रबर हानि गर्न सक्छन् कि सामाग्री युक्त मिश्र धातु संग सम्पर्क अनुमति नदिनुहोस्। पीवीसी सामग्री सील प्याकेज गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिदैन। विभिन्न सामाग्री को छाप एक साथ मिसाउन हुँदैन।
हो, हामी कस्टम मोल्डेड रबर र सिलिकॉन रबर उत्पादनहरु विभिन्न रंगहरुमा उत्पादन गर्न सक्छौं, र code कोड एक आदेश को मामला मा आवश्यक हुनेछ।
हट ट्याग: OEM कस्टम Nitrile उच्च उछाल रबर बल, कारखाना, अनुकूलित, निर्माताहरु, चीन, सस्तो, आपूर्तिकर्ता
वर्ग रबर सील
नीलो रबर ट्यूब बेलो
रंग Dustproof NBR रबर धौंकनी
कालो वर्ग NBR रबर सील गैसकेट
मास्टर सिलिन्डर कालो EPDM रबर सील
विशेष आकारको सील